Hevitra MPANOHARIANA | Aprily 2020
2020-04-08 @ 14:25 in Ankapobeny
Manomboka izao dia lasa mipetraka amin'ny fanazavana ny mialoha sy ny aorian'ny antsafa nifanaovan'ny mpanora-gazetin'ny Real TV tamin'Atoa Ravalomanana Marc FTA tamin'ny 6 avrily 2020. Talohan'ny antsafa aho, raha nahatsikaritra ianareo mpamaky, tsy nanasa mihitsy ary tsy niangavy ny olona hanaraka ny fihibohana, fa tsy nanakana mihitsy ihany koa ny olona tsy hanao fihibohana.
Tsy niteny mihitsy aho fa manao fihibohana izahay mianakavy kely ato an-trano, ary izaho irery ihany no miantsena any Sabotsy rehefa tsy maintsy atao izany. Indray alahady (tsy misy fiangonana tsinona!) aho no niakatra maraimbe hatrany Andravoahangy nividy legioma, dia izay ihany no niakarako tany Antananarivo. Rehefa tonga aty an-trano aho manao ny fomba fitandremana rehetra fantatra mba tsy hamindra amin'ny vady aman-janako sanatria.
Talohan'ny antsafa aho nitaky hatrany ny ijerena ireo hafa toa tsy mety hitan'ny mpitondra fanjakana, ireo mpiahy tena, ary malahelo fa toa tsy raharahiana mihitsy ny mpiasan'ny tsy miankina voatery manaraka ny sitrapon'ny lehibeny. Azoko tsara fa tsy te-hiditra amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa tsy miankina ny fanjakana matoa manao izany, saingy mbola lasa ambanin-javatra hatrany ny ain'olombelona amin'ny sehatra tsy miankina ka mbola tanako ho fahadisoana hatrany izany.
Tsy ankasitrahako velively ihany koa ny fanomezana "spectacle" lasa misy tanjona roa, voalohany handresen-dahatra ny olona ato anatiny hoe tena manao zavatra ilay fanjakana ka tena tia ny vahoakany sy tsy mitandro hasasarana ny amin'izany, dia eo ihany koa ilay hoe toa zary toerana natao hakana ilay aretina "coronavirus" ihany koa ireny toerana ireny noho ny famoriana olona. Faharoa indray handresen-dahatra ny any ivelany fa tena ampiasaina araka ny tokony ho izy tokoa ireo fanampiana-fampanjanaham-bola avy amin-dry zareo.
Fa eto amin'ny aorian'ny antsafa isika amin'izao fotoana izao. Azo lazaina hoe nampihiratra ny maso ihany ilay antsafa ka ahasahiana mitaky zavatra hafa noho ny teo aloha. Ahoana tokoa moa ny amin'ireo fampindramam-bola tsy hay isaina intsony raha amin'ny vola malagasy? Dia ohatrinona tokoa moa izany izao ny vola natokana hiatrehana ny krizy nateraky ny Covid-19 izao eto Madagasikara?
Raha tsy mbola nitondra firenena ilay olona nanontanian'ny mpanora-gazety dia mety azo sainina ny hoe tsy hainao ny hakelin'ity volabe kirakiraina ity ka tsy hahasahana ny vahoaka manontolo (izay tratran'ny fihibohana) na oviana na oviana. Fa efa nitondra ny firenena ilay olona sady mahasahy miteny fa mahay mitantam-bola ka dia tsy mahita avaly loatra amin'izay ikirakirana ny vola ka ny hany tsikera dia hoe "maso mahita vola ny an-drangahy ity"! Saingy izao, tsy nitaky ny hiarahana mitantana ny vola ilay rangahy fa mitaky ny mangarahara amin'ny ampiasana ny vola. Asa rahoviana no hanao izany tamberin'andraikitra izany ny mpitondra satria lasa miara-manontany aminy ihany koa ny hafa.
Raha heverina izany dia mahasahana ny olon-drehetra ihany ilay vola nomena-nindramina avy any ivelany, afaka miditra amin'ny "chômage technique" ireo orinasa tsy miankina fa afa-mandray fanampiana ihany koa ireo mpiasa ireo, raha ny tena ara-drariny. Amin'izay fotoana izay dia tsy misy ny fiangarana hoe ry zareo ary na ry zareo atsy ihany no mahazo fa tsy ny olon-drehetra. Saingy fantatra fa tsy hahavita izany ny ao amin'ny fitondrana fa izay raisin'ny mpikamban'ny LOHARANO lisitra ihany no omena. Tsy hahavita satria tsy ampy olo-marina hizara ara-drariny ireny fanampiana izay mbola averina ireny... satria trosa no hakana azy... ry zareo.
Mitady hanao ilay "spectacle" ny sasantsasany saingy tonga dia mahalikiliky ny hafa satria maneho avy hatrany ny fiangarana atao sy/na fomba hanodinam-bola ihany koa sanatrian'izany satria kapain-tsy hita fery iny. Koa azo heverina noho izany eo amin'ny sehatra sosialy fa rehefa hizara dia zarao ny rehetra fa tsy ny sasantsasany ihany fa efa betsaka io vola io. Tsy niresaka ny fikarakarana ny marary aho eto aloha...